2017 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ | Learn about USAHello's impact | USAHello
အဆိုပါ RCO အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုက္ခသည်များ & ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်အထူး created တစ်ခုတည်းသောပြီးပြည့်စုံသောဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် 2017 ပေးခဲ့ 100,000 သူတို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကူညီရန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အရင်းအမြစ်များနှင့်အတူအသစ်ရောက်ရှိလာသော.
အစား, ကျနော်တို့ရောက်ရှိ 250,000.
အပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်, ကျနော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုက္ခသည်များအားဖြင့်ပြောပြီအသုံးအများဆုံးဘာသာစကားများ၌အကြှနျုပျတို့၏အရင်းအမြစ်များအများစုပူဇော်. တတ်နိုင်သမျှ, ကျနော်တို့ပညာရှင်ပီသစွာဤအရင်းအမြစ်များဘာသာပြန်ဆိုဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ employ.
အများစုက RCO သွားရောက်လည်ပတ်အသစ်ရောက်ရှိလာသောအသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားများပါဝင်သည်:
အဆိုပါ RCO နှစ်ခုဘာသာစကားများနားမှာဘက်ကြည့်ရှုအားပေးခံရဖို့ခွင့်ပြုထူးခြားသောအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးထားပါတယ်. သူတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူနှင့်ပိုမိုပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုအသိခံစားရစဉ်ဤအသစ်ရောက်ရှိလာသောမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားတွင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြု.
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်နယ်အတွက်အသစ်ရောက်ရှိလာသောရောက်ရှိနေကြပါတယ်, မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်နေရာ. အသုံးပြုသူကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်မားဆုံးနံပါတ်များကိုထိုမြို့ရှိကြ၏:
သို့သော်ငါတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သော Louisville ကအဖြစ်သေးငယ်မြို့မြို့တို့မှအများအပြားဧည့်သည်များရှိခဲ့, ကင်တပ်ကီ; Fort Wayne, Indiana ပြည်နယ်; ကြှဲ, နယူးယောက်; တဖက်, မြောက်ကိုရီးယားဒါကိုတာ; အွန်, အော်ရီဂွန်; နှင့် Ashburn, ဗာဂျီးနီးယား.
အဆက်မပြတ်ဆန့်ကျင်-Immigrant ပြောင်းလဲနေတဲ့၏အဓိပ္ပာယ်အောင်ကြိုးစားပါ မူဝါဒများ
"ငါ USA တွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ကတည်းက 2009, ငါအများကြီးယဉ်ကျေးမှုနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းခဲ့. ငါသည်ငါ့ရှုံးနိမ့် [၏အဓိပ္ပာယ်] ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတန်ဖိုးနှင့်ငါအများကြီးနောင်တခဲ့. အဆိုပါ RCO site ကိုတစျဆငျ့, ငါအရာများစွာကိုနားလည်သဘောပေါက် လာ. ငါအသစ်တစ်ခုကိုမျက်နှာတဆင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ့မြင်. ယခုတွင်ငါသည်အမေရိကတိုက်တွင်ပိုမိုချိတ်ဆက်နှင့်ပျော်ရွှင်ခံစားကြရသည်။"
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းအသစ်ရောက်ရှိလာသောထောင်ပေါင်းများစွာ၏နိုင်ငံသားများဖြစ်လာစေရန်နှင့်၎င်းတို့၏ GED အဘို့အဆင်သင့်ရဖို့ကကူညီပေးခဲ့® စာမေးပွဲများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းပိုင်းရည်မှန်းချက် 2017 ကျောင်းအပ်ဖို့ဖြစ်တယ် 2,000 ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားလူတန်းစားအတွက်သင်ယူသူ.
အစား, ကျွန်တော်စာရင်းသွင်း 4,091.
ကျနော်တို့အလားတူကျောင်းအပ်ရန်မျှော်လင့် 2,000 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GED အတွက်သင်ယူသူ® အစီအစဉ်ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်က.
အစား, ကျွန်တော်စာရင်းသွင်း 7,979.
"ကျွန်မတုန်းကငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆီသို့ရောက် လာ. , 19, တဦးတည်းကလေးနှင့်အတူ. ငါစခန်းထဲမှာကျောင်းကပြီးမြောက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ. ယခုတွင်ငါသည်သားသမီးသုံးဦးရှိသည်နှင့်ငါမောင်းမနိုင်. ကျွန်မခင်ပွန်းနှစ်ခုအလုပ်အကိုင်များအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းကအိမ်မှာလာနေသည်. ငါ GED တွေ့ရှိခဲ့သည့်အခါ® အစီအစဉ်, ကျွန်မလေ့လာဖို့ဒီတော့ပျော်ရွှင်ခဲ့. ငါပြီးသားဘာသာစကားများဝိဇ္ဇာနှင့်လူမှုလေ့လာရေးလက်စသတ်ခဲ့ကြပြီးယခုငါသိပ္ပံယူနစ်ယူ. ငါကျောင်းကပြီးအောင်သောအခါအကြှနျုပျအဘို့အ proudest နေ့ကဖြစ်လိမ့်မည်။"
ဖြည့်စွက်ကာ, ကျနော်တို့လေ့ကျင့်သင်ကြားတဲ့သင်ရိုးစတင် 630 သူတို့ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဒုက္ခသည် & လူဝင်မှုကျောင်းသားများကိုအောင်မြင်ဖို့ကူညီဖို့ဘယ်လိုတိုင်းပြည်အနှံ့ပညာတတ်များ.
သင်တန်း၏အဆုံးအားဖြင့်,3ထဲက4ပြီးသားမိမိတို့ကျောင်းတွင်သင်ယူချင်ပါတယ်တစ်ခုခုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်.
ငါတို့သည်အသစ်ရောက်ရှိလာသောကူညီရန်အသစ်ရောက်ရှိလာသောအားဖြင့်အားထုတ်မှုထောက်ခံ, ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် 104 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားဒုက္ခသည်တွေကရေးသားဆောင်းပါးများ.
"အဆိုပါ RCO ဘို့စာရေးငါပိုင်ကဲ့သို့ငါ့ကိုခံစားရစေသည်. ငါသည်ငါ့ဇာတ်လမ်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရရချင်ကြပါဘူး. ငါကလူကိုငါ့ဇာတ်လမ်းကိုသိလို။"
ဒေါင်းလုပ် ဒီဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာတစ်ခု .pdf.
2017 အဆိုပါ RCO များအတွက်တိုးတက်မှု၏တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏အသီးအသီး outperformed. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ရက်ရောရောကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းမှနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Foundation မှထောက်ခံသူများအားဖြင့်ဂုဏ်ပြုကြသည်:
ဒါဝိဒ်သည် Rockefeller ရန်ပုံငွေအဖွဲ့
Rutgers Presbyterian ဘုရားကျောင်း
ငါတို့သည်ယခုနှစ်အများအပြားတစ်ဦးချင်းစီအလှူငွေများကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်, အရာကျော်အထိထည့်သွင်း $70,000. သငျသညျအခါဘယ်လိုသူတို့အများဆုံးလိုအပ်ကျွန်တော်တို့ကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကကူညီကူညီပေးနေကြပါသည်.
ကုလားထိုင် | ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျအမေရိကန်အင်စတီကျု
ဘဏ္ဍာရေးမှူး | ဒါဝိဒ်သည် Rockefeller ၏ရုံးမှ
အတွင်းဝန် | ပက် Belknap
Burgos Chale တိုးချဲ့
Burgos Chala ဥပဒေခိုင်မြဲသော
ရေတပ် & ရိန်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရေးစင်တာ
ဘုရားကျောင်း World Service
အဆိုပါ RCO လက်ပံအခြေစိုက်ဖြစ်ပါတယ်, အော်ရီဂွန်. ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာဖြစ်ပါသည် 2420 NE စန္ဒီ, suite 102, လက်ပံ, အော်ရီဂွန်, 97213, ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အများစုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားပျံ့နှံ့နေကြသည်ပေမယ့် (နှင့်ကမ္ဘာလုံး).